လူရှ ငျတျော အဖှဲ့ ရဲ့ တာဝနျပကျြကှကျမှုတှကေို ဖှငျ့ခလြိုကျ တဲ့ လူရှငျတျော ဦးကောငျး ကြျော – Shwewiki.com
လူရှငျတျောတဈဦးဖွဈတဲ့ ဦးကောငျးကြျောဟာ သူ့ရဲ့ ပွောငျမွောကျတဲ့ ဟာသတှနေဲ့အတူ ပရိသတျကို ရသမွောကျစှာရယျမောပြျောရှငျစနေိုငျသူတဈဦးဖွဈပါတယျ….လူရှငျတျောလောကကို အတျောသံယောဇဉျရှိသူတဈဦးဖွဈပွီး ပွောစရာရှိရငျလညျး ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးထောကျပွပွောဆိုတတျသူတဈဦးဖွဈပါတယျ…..ဒါ့အပွငျသူဟာ လူရှငျတျောအသငျး(ရနျကုနျ)ရဲ့ ပွနျကွားရေးမှူးတာဝနျကို ထမျးဆောငျနသေူတဈဦးဖွဈပွီး မကွာသေးမီအခြိနျက ဒီအလုပျကနေ သူ့သဘောနဲ့ သူနှုတျထှကျကွောငျး ကွညောခကျြရေးခဲ့ပါတယျ…
လူရှငျတျောလောကကိုအလှနျသံယောဇဉျကွီးသူတဈဦးက ခုလို နှုတျထှကျသှားတဲ့အပျေါ အားလုံးကလညျး အံ့သွနကွေတာဖွဈပွီး ဘာကွောငျ့ခုလိုနှုတျထှကျရသလဲဆိုတာကိုလညျး သိခငျြနကွေတာပါ…အကွောငျးရငျးကို ရရေရောရာမသိရပမေဲ့ သူ့ရဲ့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာမှာ ထုတျဖျောရေးသားခဲ့တဲ့ စာအရတော့ အသငျးရဲ့ တာဝနျပေါ့လြော့မှုတှကေို စိတျသဘောမတှတေဲ့ပုံပါပဲ…
ဦးကောငျးကြျောရေးသားခဲ့တာကတော့ “မပွောခငျြပမေဲ့ ပွောရပါဦးမညျ ။ ဖွဈစဉျ (၁)….လူရှငျတျော အသငျးရဲ့ကနျတော့ခံသကျကွီး ဦးဝါဂှမျး ကငျဆာရောဂါဖွငျ့ ပွညျသူဆေးရုံကွီးသို့တကျရောကျ ဆေးကုသနရေကွောငျး သိသိခွငျး အကွောငျးကွား သတငျးပို့ပေးခဲ့သျောလညျးဆေးရုံမှပွနျဆငျး လာခဲ့သညျအထိအသငျးမှမညျသူမြှ မသှားကွဘူး။
ဖွဈစဉျ(၂)………လူရှငျတျောအသငျးရဲ့အသငျးဝငျဟားညီနောငျ အဖှဲ့မှ လူရှငျတျောလေး နိုးတူး အကွောတှအေားနညျးပွီး ဆိုငျးကုနျလို့ ရနျကုနျဆေးရုံကွီးကို တငျလိုကျရကွောငျး သိသိခငျြး အသငျးကို အကွောငျးကွား အသိပေးခဲ့ပမေဲ့ ဆေးရုံ ကနသောပွနျဆငျးလာတယျ….အသငျးက ဘယျသူမှ ရောကျမလာကွဘူး ။ လူရှငျတျောအသငျးဖှဲ့စညျးခဲ့တဲ့ရညျရှယျခကျြက သကျကွီးဟာသပညာရှငျဆရာမြားကို ကူညီထောကျပံ့ကနျတော့ရနျနှငျ့ အသငျးဝငျလူရှငျတျောမြား ယခုလိုကမ်ြမာရေးခြို့ယှငျးတာ အရေးပျေါဖွဈခဲ့ရငျ တတျနိုငျသလောကျ ကူညီပေးကွဖို့ဖွဈတယျ ။
(ဦးဝါဂှမျး ) သကျကွီးကနျတော့ခံ ပညာရှငျ။ (နိုးတူး) အသငျးကိစ်စမြား တကျကွှစှာပါဝငျပေးခဲ့သူတဈဦး။ ပွောခငျြတာက အသငျးကငှကွေေးထောကျပံ့မှုထကျ အသငျးသားတဈယောကျ နာယကတဈယောကျ အခုလိုဖွဈရငျ လူကိုယျတိုငျ သှားပွီးအားပေးတာ ထောကျပံ့တာ မြိုး ကိုကာယကံရှငျတှကေတောငျးတ တတျကွစမွဲပါ….ငှထေကျတနျဖိုးကွီးတဲ့ အလေးထားမှုကပိုပွီးအရေးကွီးပါတယျ။ ဖွဈဖွဈခငျြအခြိနျနဲ့တဈပွေးညီ သတငျးပို့ခဲ့ပမေဲ့ ဘယျသူမှ မသှားခဲ့ကွဘူး…ပှဲရာသီမို့ မအားကွတာသိပမေဲ့ အားတဲ့သူမြားကို တာဝနျရှိကွသူမြားကလမျးညှနျမှာကွားပွီး သှားခိုငျးလို့မရပဘေူးလား ?????
အသငျးကတာဝနျရှိတဲ့သူတှအေကုနျလုံးမအားဘူးဆိုတာကတော့ဖွဈခဲလှပါတယျ ????မတျောလို့မြား ကိုသှားပွီးထောကျပံ့ပေးမှ ဆေးဝါးကုသမှုလုပျရမဲ့သူမြိုးဆိုအခုလို လုပျပုံမြိုးနဲ့ဆို အသကျတောငျ မီလိုကျမှာမဟုတျဘူး ????ယခုလို မတ်ေတာ စတေနာတရားတာဝနျ မြား ပေါ့လြော့နပေုံမြိုးနဲ့အသငျးရဲ့အနာဂါတျ ကတော့ ???ကိုငျး မပွောခငျြပမေဲ့ ပွောလိုကျပွီဗြာ ????? ကောငျးကြျောလူရှငျတျော..” ဆိုပွီး အသငျးရဲ့ တာဝနျပေါ့လြော့မှုတှကေို ပွောပွခဲ့တာပါ….
ဒါကွောငျ့ ဦးကောငျးကြျောဟာ ဒီအခကျြတှကေိုမကွိုကျလို့မြား ပွနျကွားရေးမှူးတာဝနျကနေ နှုတျထှကျလိုကျသလားဆိုပွီး ပရိသတျတှကေ ထငျမွငျယူဆနကွေပါတယျ…..
လူရွှ င်တော် အဖွဲ့ ရဲ့ တာဝန်ပျက်ကွက်မှုတွေကို ဖွင့်ချလိုက် တဲ့ လူရွှင်တော် ဦးကောင်း ကျော်
လူရွှင်တော်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဦးကောင်းကျော်ဟာ သူ့ရဲ့ ပြောင်မြောက်တဲ့ ဟာသတွေနဲ့အတူ ပရိသတ်ကို ရသမြောက်စွာရယ်မောပျော်ရွှင်စေနိုင်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်….လူရွှင်တော်လောကကို အတော်သံယောဇဉ်ရှိသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ပြောစရာရှိရင်လည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းထောက်ပြပြောဆိုတတ်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်…..ဒါ့အပြင်သူဟာ လူရွှင်တော်အသင်း(ရန်ကုန်)ရဲ့ ပြန်ကြားရေးမှူးတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်နေသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး မကြာသေးမီအချိန်က ဒီအလုပ်ကနေ သူ့သဘောနဲ့ သူနှုတ်ထွက်ကြောင်း ကြေညာချက်ရေးခဲ့ပါတယ်…
လူရွှင်တော်လောကကိုအလွန်သံယောဇဉ်ကြီးသူတစ်ဦးက ခုလို နှုတ်ထွက်သွားတဲ့အပေါ် အားလုံးကလည်း အံ့သြနေကြတာဖြစ်ပြီး ဘာကြောင့်ခုလိုနှုတ်ထွက်ရသလဲဆိုတာကိုလည်း သိချင်နေကြတာပါ…အကြောင်းရင်းကို ရေရေရာရာမသိရပေမဲ့ သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ ထုတ်ဖော်ရေးသားခဲ့တဲ့ စာအရတော့ အသင်းရဲ့ တာဝန်ပေါ့လျော့မှုတွေကို စိတ်သဘောမတွေ့တဲ့ပုံပါပဲ…
ဦးကောင်းကျော်ရေးသားခဲ့တာကတော့ “မပြောချင်ပေမဲ့ ပြောရပါဦးမည် ။ ဖြစ်စဉ် (၁)….လူရွှင်တော် အသင်းရဲ့ကန်တော့ခံသက်ကြီး ဦးဝါဂွမ်း ကင်ဆာရောဂါဖြင့် ပြည်သူဆေးရုံကြီးသို့တက်ရောက် ဆေးကုသနေရကြောင်း သိသိခြင်း အကြောင်းကြား သတင်းပို့ပေးခဲ့သော်လည်းဆေးရုံမှပြန်ဆင်း လာခဲ့သည်အထိအသင်းမှမည်သူမျှ မသွားကြဘူး။
ဖြစ်စဉ်(၂)………လူရွှင်တော်အသင်းရဲ့အသင်းဝင်ဟားညီနောင် အဖွဲ့မှ လူရွှင်တော်လေး နိုးတူး အကြောတွေအားနည်းပြီး ဆိုင်းကုန်လို့ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးကို တင်လိုက်ရကြောင်း သိသိချင်း အသင်းကို အကြောင်းကြား အသိပေးခဲ့ပေမဲ့ ဆေးရုံ ကနေသာပြန်ဆင်းလာတယ်….အသင်းက ဘယ်သူမှ ရောက်မလာကြဘူး ။ လူရွှင်တော်အသင်းဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်က သက်ကြီးဟာသပညာရှင်ဆရာများကို ကူညီထောက်ပံ့ကန်တော့ရန်နှင့် အသင်းဝင်လူရွှင်တော်များ ယခုလိုကျမ္မာရေးချို့ယွင်းတာ အရေးပေါ်ဖြစ်ခဲ့ရင် တတ်နိုင်သလောက် ကူညီပေးကြဖို့ဖြစ်တယ် ။
(ဦးဝါဂွမ်း ) သက်ကြီးကန်တော့ခံ ပညာရှင်။ (နိုးတူး) အသင်းကိစ္စများ တက်ကြွစွာပါဝင်ပေးခဲ့သူတစ်ဦး။ ပြောချင်တာက အသင်းကငွေကြေးထောက်ပံ့မှုထက် အသင်းသားတစ်ယောက် နာယကတစ်ယောက် အခုလိုဖြစ်ရင် လူကိုယ်တိုင် သွားပြီးအားပေးတာ ထောက်ပံ့တာ မျိုး ကိုကာယကံရှင်တွေကတောင်းတ တတ်ကြစမြဲပါ….ငွေထက်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ အလေးထားမှုကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်။ ဖြစ်ဖြစ်ချင်အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ သတင်းပို့ခဲ့ပေမဲ့ ဘယ်သူမှ မသွားခဲ့ကြဘူး…ပွဲရာသီမို့ မအားကြတာသိပေမဲ့ အားတဲ့သူများကို တာဝန်ရှိကြသူများကလမ်းညွှန်မှာကြားပြီး သွားခိုင်းလို့မရပေဘူးလား ?????
အသင်းကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးမအားဘူးဆိုတာကတော့ဖြစ်ခဲလှပါတယ် ????မတော်လို့များ ကိုသွားပြီးထောက်ပံ့ပေးမှ ဆေးဝါးကုသမှုလုပ်ရမဲ့သူမျိုးဆိုအခုလို လုပ်ပုံမျိုးနဲ့ဆို အသက်တောင် မီလိုက်မှာမဟုတ်ဘူး ????ယခုလို မေတ္တာ စေတနာတရားတာဝန် များ ပေါ့လျော့နေပုံမျိုးနဲ့အသင်းရဲ့အနာဂါတ် ကတော့ ???ကိုင်း မပြောချင်ပေမဲ့ ပြောလိုက်ပြီဗျာ ????? ကောင်းကျော်လူရွှင်တော်..” ဆိုပြီး အသင်းရဲ့ တာဝန်ပေါ့လျော့မှုတွေကို ပြောပြခဲ့တာပါ….
ဒါကြောင့် ဦးကောင်းကျော်ဟာ ဒီအချက်တွေကိုမကြိုက်လို့များ ပြန်ကြားရေးမှူးတာဝန်ကနေ နှုတ်ထွက်လိုက်သလားဆိုပြီး ပရိသတ်တွေက ထင်မြင်ယူဆနေကြပါတယ်…..